Bogga ugu weyn SIDEE LOOGU SOO DIRAA KAARAHA HADIYADA INTERNETKA 2022
Kaararka hadyada waxaa sidoo kale loo yaqaan shahaadooyin hadiyadeed oo la siiyo dadka qaarkiis ee ku nool Waqooyiga Ameerika iyo foojarada hadiyadaha dadka qaar ee Boqortooyada Ingiriiska. Ma rabtaa in aad qof u dirto kaarar hadyad ah oo aad ka tagtay in aad la yaabto sida kaararka hadiyadda loogu diro online?
Hagaag, hagahan dhamaystiran ayaa ku tusi doona sida loogu diro kaadhadhka hadyada onlaynka. Kaararka hadiyadda waxa kale oo loo isticmaali karaa beddelka lacagaha la siiyo ganacsiyada qaarkood. Waxa laga iibsan karaa dukaan kasta oo u aqbala ikhtiyaarka lacag bixinta.
Waxaa jira kaarar hadiyadeed oo badan oo laga heli karo dukaamo tafaariiqeed oo badan tusaale ahaan kaadhadhka hadyada Amazon, kaadhadhka hadyada iTunes, kaadhadhka hadyada Walmart, iwm.
Ma ku diri karaa Kaararka Hadiyada Online?
Weli ma waxaad weydiinaysaa "ma diri karaa kaararka hadiyadda onlayn?", sii wad akhrinta si aad u aragto jawaabaha su'aashan. Habka cusub ee ay dadku hadiyadaha ugu diraan adduunka oo dhan waa iyagoo isticmaalaya kaararka hadiyadda.
Waxaa suurtogal ah in kaararka hadiyadda lagu soo diro onlaynka email ahaan, fariimaha qoraalka ah, warbaahinta bulshada iyo qaar ka mid ah apps mobile. Laakin ka hor inta aadan u dirin kaadhadhka hadyada onlaynka, waa inaad xasuusataa:
Kaadhadhka hadiyaddu waa waqti miyir leh.
Haysashada ciwaanka saxda ah sidoo kale waa muhiim.
Had iyo jeer la soco ka dib markaad dirto kaararka.
Ka fiirso kaadhka hadyada ee aad iibsanayso.
Haddii aad ka fikirto arrimahan ka hor intaadan dirin kaadhadhka hadiyadda, waxaad ogaan doontaa in wax kala beddelashadu si habsami leh u socon doonto. Laakin kiis uu u socon waayo sidii loogu talagalay, hubi kaadhka caagga ah oo la xiriir shirkadda si aad u ogaato waxa dhibku yahay.
Ma ku diri karaa Kaararka Hadiyada Amazon Online?
"Ma diri karaa kaararka hadiyadda Amazon onlayn?" Dad badan ayaa su'aashan is weydiinayay. Jawaabtu waa haa, waxaad ku soo diri kartaa kaararka hadiyadda ee Amazon online. Kaararka hadyada ee Amazon waa mid ka mid ah kaadhadhka hadyada ee loogu doonista badan yahay adduunka.
Kadhkan hadiyadda ah waxaa loogu diri karaa dadka meel kasta oo ay joogaan emaylka, WhatsApp, iyo habab kale oo la aqbali karo. Ma ogtahay in kaadhadhka hadyada amazon aad wax ka iibsan karto Amazon ama qolo kasta oo saddexaad?
Markaa, u dirida hadiyaddan qoyska iyo asxaabta waa waxa ugu fiican ee aad u samayn karto iyaga. Waxaan ku tusi doonaa habab fiican oo aad ugu diri karto qof kasta meel kasta oo adduunka ah.
Kaararka hadyada Amazon waxaa lagu soo diri karaa hababka soo socda:
Iimayl ahaan: Sida laga soo xigtay isticmaalayaashu, waxaa la rumeysan yahay in kaararka hadiyadda loo diro emaylka ay tahay mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu diri karo laguna heli karo kaararka hadiyadda. Shayga xun ee habkan ku saabsan ayaa ah inaad diri karto oo keliya kaararka dhan $10.
WhatsApp: Waqtigan xaadirka ah, tani waa hal dariiqo oo dadku ugu diraan kaararka hadiyadda amazon saaxiibada iyo qoyska. Kaadhadhkan hadiyadda ah waxaad ku diri kartaa sawir ahaan adiga oo isticmaalaya WhatsApp chat. Dadku habkaan way jecel yihiin sababtoo ah way fududahay oo waxaad si fudud u ogaan doontaa in qofka aad u dirtay uu helay iyo in kale.
Iyada oo lagu daabaco guriga: Habkan waxaa inta badan la adeegsadaa marka aad rabto in aad adigu u dhiibto qofka. Waxaa jira tillaabooyin fudud oo la raaco si loo hubiyo in habkan kaadhadhka hadiyadda loogu diro uu adiga kuu shaqeeyo. Marka hore, waxaad gasho bogga Amazon oo fur bogga 'ku daabac guriga'.
Marka labaad, waxaad dooran kartaa qaddarka aad rabto ($ 10, $ 20, $ 30, iwm.), naqshadeynta aad rabto, iyo tirada aad rabto. Ka dib marka aad dhammayso tallaabooyinkan, ka dib tallaabada xigta waa inaad ka hubiso bogga internetka.
Kaararka hadiyadda sidoo kale waxaa lagu soo diri karaa SMS laakiin hadda dadku ma isticmaalaan sababtoo ah hababka ugu waxtarka badan sida emailka, WhatsApp, iyo daabacaadda hababka guriga.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Codsado Naafada Florida
Sidee buu Mid Online Kaadhadhka Hadiyada ugu soo diraa Hindiya USA?
Horumarka hadda ee tignoolajiyada, kaadhadhka hadyada waxaa loo diri karaa wadamada oo dhan. Tusaale ahaan, waxaa laga soo diri karaa meel kasta oo adduunka ka mid ah oo loo diro Hindiya.
Waxaa jira shirkado iyo shabakado badan oo shaqadoodu tahay inay kaa caawiyaan inaad u dirto kaararka hadiyadda kuwa aad jeceshahay ee Hindiya iyo gaarsiintooda waa la hubaa iyo waqtiga. Marka laga reebo dirida kaararka hadiyadda, waxay sidoo kale soo diraan waxyaabo ay ka mid yihiin baabuurta, ubaxa, baaskiilada, iyo hadiyad kasta oo aad dukaanka ku leedahay.
Kahor intaadan u dirin kaarka hadyada qofkasta oo India jooga mareegahaas, iska diiwaan geli oo la samee akoon. Samaynta akoon iyaga ayaa laga yaabaa inay u baahdaan akoonkaaga Gmail-ka, furaha sirta ah ee cusub, taariikhda dhalashada, iyo xataa ciwaankaga, iwm.
Kuwani waa shabakadaha kaa caawin kara inaad u dirto kaararka hadiyadda online ee Hindiya marka laga reebo emailka ama xulashada WhatsApp.
#1. Xariirka Hibada Hindida:
Mareegtan waxay bixisaa hadiyado aan caadi ahayn kuwa raba inay hadiyado u soo diraan kuwa ay jecel yihiin ee Hindiya. Hadiyadahan waxaa loogu talagalay dabaaldegyada dhalashada, sannad-guurada iyo wixii la mid ah, maaha kaliya kaararka hadiyadda.
Xariirka hadiyadaha Hindida sidoo kale wuxuu fuliyaa gaarsiinta degdega ah kaas oo la keeni karo isla maalinta iibka. Waxay geyn karaan hadiyado ilaa 200 oo magaalo oo Hindi ah isla maalintaas laakiin waa in la diiwaan geliyo kahor 2 galabnimo maalintaas.
#2. Taj Online:
Kani waa degel kale oo Hindidu leedahay oo caawisa qof kasta oo Hindiya jooga ama ka baxsan Hindiya. Haddii aad ku sugan tahay Hindiya ama meel ka baxsan Hindiya oo aad rabto inaad u dabaaldegto dhalashada, Diwali, sannad-guurada, iyo wixii la mid ah, waxaad isticmaali kartaa Taj online si aad hadiyado ugu dirto waddanka oo dhan ama dalka gudihiisa.
Haddii kaadhka hadyaddoodu shaqayn waayo, waxaad haysataa farqi 7-maalmood ah si aad ugu soo celiso Taj online iyada oo ku saleysan siyaasaddooda soo laabashada.
#3. Hadiyadaha Hindiya oo dhan:
Mareegtan waxay ku siinaysaa fursad aad ugu dirto kaadhadhka hadyada online-ka Hindiya. Mareegtan, dhib malahan haddii aad joogtid Ameerika, Ghana, ama Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska kaadhadhka hadiyadda weli waxay heli karaan qofka aad jeceshahay ee Hindiya.
#4. Hadiyado yaab leh:
Sida shabakadaha kale ee Hindida, hadiyadaha la yaabka leh ayaa sidoo kale qayb ka ah kuwaas oo ka caawiya dadka inay u soo diraan hadiyado meel kasta oo gudaha iyo dibadda ah oo loo diro magaalo kasta oo Hindiya ah. Mareegtan waxa kale oo ay bixisaa keenista saqda dhexe waxana ay leedahay koox had iyo jeer diyaar u ah inay dirto kaadhadhka hadyada wakhti kasta iyo maalin kasta.
Gifts2indiaonline.com sidoo kale waa shirkad kale oo Hindiya ku taal oo gacan ka geysan karta u dirida hadiyadaha qayb kasta oo Hindiya ah. Waxay hadiyadda u diri karaan qof kasta oo jooga magaalo kasta oo Hindiya ku taal. Waxay kaloo bixiyaan adeegyo saqda dhexe ah sida shirkadaha kale ee hadyada.
Kuwani waa shabakadaha aad isticmaali karto inaad kaararka hadiyadda online ugu dirto Hindiya iyo hadiyado kale. Hindiya waxay leedahay in ka badan 200 oo magaalo, shirkadahani waxay kaa caawin doonaan inaad hadiyado ugu soo dirto magaalooyinkan oo qiimo leh.
Marka laga reebo shirkadaha kor ku xusan, shirkado kale oo badan ayaa diyaar u ah inay bixiyaan adeegyadan waxayna u socotaa inay muujiso in u dirida hadiyadaha Hindiya aysan dhib lahayn.
Sida loogu soo diro Kaararka Gft ee Maraykanka
Waxaa jira habab kala duwan oo hadiyadaha online loogu diro USA. Haddiyadu maaha inay sugaan dhacdo gaar ah sababtoo ah hadiyado waxaa la bixiyaa si ay u muujiyaan jacayl iyo daryeel.
XIDHIIDHKA: 10ka Mas Ee Aduunka Ugu Khatarsan
Kaararka hadiyadda waxaa loo diri karaa dadka ku nool USA iyadoo la isticmaalayo hababkan midkood: WhatsApp, email, ama SMS.
WhatsApp waxaa loo yaqaanaa dhammaan habka ugu fudud ee kaararka hadiyadda loogu diro dadka ku nool Mareykanka. Waxay tusinaysaa in qaataha qaatay kaadhka hadyada iyo in kale.
Habka iimaylka sidoo kale waa hab kale oo si weyn loo isticmaalo laakiin maaha mid baahsan sida habka WhatsApp oo waxay ku kooban tahay qadar cayiman oo kaararka hadiyadda ah.
Waxa jira shabakado kale oo iyaguna kaa caawinaya in ay kaadhadhka hadyada u soo diraan USA laakiin waa inaad u noqotaa macaamiil ka diiwaan gashan si ay kuu gaadhsiiyaan.
Website-yadan oo kale waa 1800giftportal.com, giftsnideas.com, giftblooms.com, iwm
Akhri: op 15 Ma Jiro Hubin Amaahda Shakhsiyeed ee 2022
Sida Kaararka Hadiyada loogu diro Kanada
Haddii aad qorsheyneyso inaad u dirto kaarka hadiyadda qof Kanada jooga oo aad ka fekereyso siyaabo aad ugu diri karto, ha werwerin inay jiraan siyaabo aad kaararka hadiyadda ugu diri karto onlayn Kanada.
Waxaa lagu samayn karaa WhatsApp, email, SMS, ama xitaa degel Canadian ah oo kaa caawin doona inaad dhammaystirto bixinta. Isticmaalka WhatsApp si loogu diro kaararka hadiyadda onlayn Kanada maaha wax cusub.
Habkani wuxuu u ogolaanayaa soo-diraha inuu soo diro qadar kasta oo kaadhka hadiyadda ah waxaad sidoo kale la socon kartaa qaataha si aad u ogaato in uu helay iyo in kale. Habka WhatsApp-ku wuxuu qaadanayaa kaliya dhowr daqiiqo si uu u qabsado kaadhka hadiyadda oo uu ugu diro qaab muuqaal ah.
Habka iimaylka waxa kale oo uu isticmaalaa hab la mid ah habka WhatsApp, kaliya in kiiskan cadadka kaararka hadiyadda waa xadidan yahay oo ma ogaan doontid in qaataha ah ayaa helay kaarka hadiyadda iyo in kale.
Waxa kale oo jira hab kale oo kaararka hadiyadda loogu diri karo online Kanada, waana iyada oo loo marayo shirkad hadiyadeed oo ka shaqeysa online iyo offline. Ma joogtid Kanada oo waxaad rabtaa inaad u dirto kaararka hadiyadda qof Kanada jooga, shirkadahani waxay noqon karaan kuwo ku caawin kara haddii aadan isticmaali karin habka WhatsApp iyo emailka:
Waxaa la aasaasay 2009 waxayna ku taal Kanada. Waa koox midaysan oo e-ganacsi ah waxayna sidoo kale kaa caawin karaan inaad gaadhsiiso kaadhadhka hadiyadaha kuwa aad jeceshahay magaalo kasta oo Kanada ah.
Shirkadani waxa ay suurto galisay in ay u soo dirto kaadhadhka hadyada magaalo kasta oo Kanada ku taal iyada oo la kaashanaysa WeChat iyo mid kasta oo ka mid ah baayacmushtarka maxaliga ah ee Kanada. Waxa kale oo aad u diri kartaa kaadhadhka hadyada cadad kasta iyo nooc kasta.
#3. Boostada Kanada:
Shirkaddani waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad u dirto kaararka hadiyadda mid ka mid ah kuwa aad jeceshahay ee Kanada. Waxa kale oo ay ka qayb qaadanayaan soo furashada kaadhadhka hadyada kuwa xiisaynaya.
Dhammaan kuwan waa shirkado kaa caawin kara inay kuu soo diraan kaadhka hadyada ee aad haysato kuwa aad jeceshahay ee Kanada. Waxay kaloo gacan ka geysan karaan dirida saacadaha aan caadiga ahayn ee maalinta iyadoo ku xiran degdegga kaararka.
Sida kaararka hadiyadda loogu diro UK
Hadda way fududahay in hadiyado loo diro meel kasta oo adduunka ka mid ah adigoo gujinaya kaliya UKna maaha mid ka reeban. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loogu diro kaararka hadiyadda online UK oo i aamina waa hab fudud oo ku xiran model aad doorato.
XIDHIIDHKA: Haddii shaqada laygu dhaawaco lacag ma la i siiyaa? Shilalka Shaqaalaha
Dadka qaar ayaa dooranaya habka WhatsApp-ka, qaar ayaa doorta habka emailka, qaarna habka SMS-ka ayey doortaan halka qaarna ay u doorteen in ay doortaan mareegaha ay howsha u qabtaan.
Waan ognahay shuruudaha iyo xeerarka hagaya qaab kasta waxaanan kuu sheegi karaa in doorashada ugu fiican ee aad ku faraxsan tahay inaad dooratay ay tahay ikhtiyaarka WhatsApp.
Waxay ku tusinaysaa haddii qaataha helay oo aad diri karto qaddar kasta oo aad doorato, si ka duwan ikhtiyaarka iimaylka kaas oo xaddidaya qiimaha aad rabto inaad dirto oo u furan afduubayaasha internetka.
Habka emailku sidoo kale waa sahlan yahay laakiin ka duwan habka WhatsApp, waxaa jira xaddidaadyo.
Marka laga reebo WhatsApp-ka, iimaylka, iyo hababka SMS-ka, waxa kale oo aad isticmaali kartaa qaar ka mid ah mareegaha UK ee kaa caawin kara dirida kaararka hadiyadda magaalo kasta oo UK ah. Hoos ka eeg shabakadaha internetka
Sida kaararka hadiyadda loogu diro Australia
Haddii aad u dirayso kaararka hadiyadda waddan kasta, raac habraac la mid ah. Haddii aad go'aansato inaad dhinac ka dhigto WhatsApp, iimaylka, iyo ikhtiyaarka SMS markaa waa inaad isticmaashaa degel ama shirkad Australian ah si aad ugu gudbiso qofka aad dooratay.
Guud ahaan, isticmaalka WhatsApp ayaa ka dhigay mid aad u fudud in kaararka hadiyadda online loogu diro Australia. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad hesho kaadhka hadiyadda oo ku soo dir WhatsApp-kaaga waxayna ku ogeysiin doontaa in qofku helay.
Mareegaha qaar ayaa fulin kara hawlahan oo kale kuwaas oo ku saleysan Australia:
Ma u diri karaa kaadhadh hadiyadeed meel ka mid ah aduunka?
Haa, waxaad u diri kartaa kaadhadh hadiyadeed meel kasta oo aduunka ka mid ah adoo isticmaalaya mid ka mid ah hababka looga hadlay maqaalkan.
Immisa kaadhadh hadyad ah ayaan ku diri karaa WhatsApp?
Waxaad ku diri kartaa inta ugu badan ee kaararka hadiyadda ah via WhatsApp.
Ma jiraan wax khasaare ah oo kaadhadhka hadiyadda loogu diro iimaylka?
Haa, khasaaruhu waa in ay jiraan xaddidaadyo marka la dirayo iimaylka.
Lacag ma igu soo dalacayaan kaarka hadyada online-ka ah Australia?
Waxa laga yaabaa inay lacag kugu soo dalacdo. Dhammaan waxay ku xiran tahay shirkadda/mareegaha aad la shaqeyso.
Kaadhadhka hadyada ma loo isticmaalaa kaliya in lagu soo diro hadiyado?
Maya, kaadhadhka hadyada sidoo kale waxay samayn karaan lacag-bixinno wax-iibsasho.
Hagahaan dhameystiran ayaa bixiyay jawaabaha su'aasha ah sida loo diro kaararka hadiyadda onlayn. Waxaa jira dhowr siyaabood oo qofku u isticmaali karo kaararka hadiyadda iyo, loo-shaqeeyayaasha qaarkood waxay sidoo kale isticmaalaan kaararka hadiyadda si ay ugu mahadceliyaan shaqaalahooda shaqada si wanaagsan loo qabtay.
Waxaad ka iibsan kartaa kaararka hadiyadda online ama offline oo waxaad u diri kartaa mid ka mid ah kuwa aad jeceshahay iyada oo aan loo eegin meesha ay joogaan. Waxaad iibsan kartaa kaarar hadyad ah qaddar kasta oo aad u soo diri kartaa hab kasta oo ka mid ah hababka kor ku xusan ama haddii aad ka mid tahay shaqaalaha hibada iyo ecard waxaad go'aansan kartaa inaad u dirto qof aad jeceshahay meel kasta oo adduunka ka mid ah oo leh mid ka mid ah Macnaha sida ay waxtar u leeyihiin.
Qiima dhimista Ardayga Hollister: Sida Fudud kaaga Loo Helo
Sida Loo Si Fudud Ugu Bilaabo Koontada Taageereyaasha Kaliya | 9 Tallaabo Fudud
Sideen Khariidadaha Google-ka ugu xidhaa Toyota Navigation?
10 Siyaabood Oo Gaadhiga Jiidka Ah Lagu Soo Celiyo Adoon Bixin
In baabuurka lagu jiido ogolaanshaha la'aanteed waxay noqon kartaa mid ka mid ah xaaladaha ugu dhibka badan ee aad heli karto…
Dareen ahaan, waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn sida gaarka ah iyo midka gaarka ah ee aad tahay. Dad badan ayaa isku dayi doona…